» पाटन दरवार स्क्‍वायरमा कलात्मक चन्द्रमाको अवतरण !
पाटन दरवार स्क्‍वायरमा कलात्मक चन्द्रमाको अवतरण !
७ पुष २०७६, सोमबार ०६:३१
काठमाडौंको मौसम एक त चिसो त्‍यसमाथि आज ९आइतबार० वर्षकै सबैभन्दा सानो दिन। आइतबार साँझ ललितपुरको पाटन दरवार स्क्वायरमा एकाएका मानिसहरु जम्‍मा भइरहेका थिए। बालबालिकाहरु बुवाआमासँग भनिरहेका थिए, ‘ ऊ त्यहाँ चन्द्रमा राखिएको छ। जाऔं न हामी पनि हेरौं अनि फोटो पनि खिचौं। आज चन्द्रमा हाम्रै नजिक आइपुगेको छ।
त्यहा आउने दरबार स्क्वायरको चार नारायणको मन्दिर अगाडि घुम्‍न आउने जोकोहीलाई पनि कलात्मक रुपमा मोहित गर्न थाल्‍यो र हेर्दा हेर्दै क्षणभरमै मानिसहरुको फोटो खिच्‍ने अनि खिचाउने र सेल्फी लिनेको भीड नै लाग्‍यो। खासमा उक्त इलुस्ट्रेशन आर्ट धरानका कलाकार मिलन राईले बनाएका हुन। उनले चन्द्रमालाई सबैले मनपराउने भएकाले नै प्रदर्शनीमा राखेर सबैको ध्‍यान केन्द्रित गर्न खोजेको बताए।
उनले भने, ‘संसारभरिका मानिस हामी एक हौ। हामीभित्र विश्‍वबन्धुत्वको नाता छ भन्‍ने उद्देश्यले नै मैले यो कलात्मक चन्द्रमाको इलुस्ट्रेशन तयार गरेको हो।’ यसलाई यसपछि पोखरा र त्यसपछि सातै प्रदेशमा प्रदर्शनीमा राखिने बताए।